Qaramada Midoobay oo walaac ka muujisay Maxabiista u xiran Maleeshiyaadka Liibiya – SBC
Qaramada Midoobay oo walaac ka muujisay Maxabiista u xiran Maleeshiyaadka Liibiya
Kooxaha Maleeshiyada eek a taliya wadanka Liibiya ayaa waxaa xabsiyada dalka waxaa ugu xiran maxaabiis ka badan 7,000 oo maxbuus kuwaasi oo siyaabo kala duwan loogu qabtay wadanka Liibiya welina dadkaasi ma helin xukun maxkamadeed siddaas waxaa lagu sheegay warbixin ka soo baxday QM.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in dadkan xiran aysan weli helin xukun cadaadalad ah islamarkaasina ay iska xiran yihiin waxaana sidoo kale gebi ahaanba dalka Liibiya aan ka shaqeyneyn Maxkamadaha iyo Booliiska iyadoona Maamulka Wadanka uu weli yahay mid aan cago adag ku tagneyn.
Warkan ka soo baxay Qaramada Midoobay ayaa waxaa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee ay soo saareen QM tan iyo inta ay dhamaadeen dagaalkii sokeeyee ee dalkaasi ka socday 8dii bilood ee la soo dhaafay.
Ciidamada kooxda NTC ee dalkaasi sida KMG u maamuleysa ayaa waxaa tan iyo intii ay socdeen rabshadaha dalkaasi ka aloosnaa ay xireen dad farabadan oo looga shakisanaa inay taageersan yihiin Hogaamiyahii wadanka Liibiya Mucamar alqadaafi waxaana dhamaan dadkaasi lagu xiray xabsiyo qaarkood qarsoodi yihiin.
QM ayaa warkeeda ku sheegtay in kooxaha Dalkaasi maamulaya iminka ay wadaan dadaalo kala duwan oo lagu howlgelinayo Laamaha Amaanka iyo kuwa Sharciga sida maxkamadaha oo kale wallow taasi ay tahay mid aan si dhab ah u muuqan.